इंस्टाग्राममा तपाईंको अर्गानिक पहुँचलाई बढावा दिँदै - Print Peppermint
जुन 30, 2020 | ब्रान्डिङ, मार्केटिङ, एसईओ, सुरूवात
के एक फोटो साझा अनुप्रयोग को रूप मा शुरू दुनिया भर मा मार्केटिंग र ब्रान्डिंग को एक प्रमुख खेलाडी भएको छ। इन्स्टाग्रामसँग असंख्य कम्पनीहरू र ब्रान्ड लगायत एक अरब भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले हरेक दिन उनीहरूको 'पहुँच' बढाउन कोशिस गर्दैछन्।
इन्स्टाग्राम पहुँच व्यक्तिको संख्या हो जुन तपाईंको सामग्रीसँग देखिन्छ वा अन्तर्क्रिया गर्दछ।
पहुँच बढाउनको एक तरीका तपाईंको सामग्रीको प्रचार गर्नको लागि इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरूको लागि भुक्तान गर्नु हो। जहाँसम्म, वैकल्पिक पहुँचमा: जैविक पहुँच, प्राप्त गर्न गाह्रो छ र अधिक मूल्यवान छ।
जैविक पहुँच तपाईंको सामग्रीको गुणस्तरमा आधारित छ र फिडमा तपाईंको पोष्टहरू माथि माथि धकेल्ने उद्देश्यसहित पोष्टि techniques तकनीकहरूमा आधारित छ। जैविक पहुँच निर्माण गर्न समय र कौशल लिन्छ र Instagram एल्गोरिथ्मको साथ काम गर्न आवश्यक छ।
एल्गोरिथ्म कालोनजिक भन्दा उनीहरूको सment्लग्नता स्तरको आधारमा फिडमा पोष्टहरू प्रदर्शन गरेर सामग्री पोष्टको विशाल मात्राको प्रबन्ध गर्नका लागि परिचित गरिएको थियो।
पहुँच बढावा, तसर्थ, संलग्नतालाई बढावा दिदै सँगसँगै जान्छ र हामी दुबै मास्टर गर्न मद्दतको लागि रणनीतिक सल्लाहहरूको सूची तैयार गरेका छौं।
यो पहिलो बिन्दु कुनै को लागी एक आश्चर्यको रूपमा आउनु पर्छ। राम्रो तपाईंको सामग्री, तपाईंको दर्शक ठूलो।
यो केवल विचारहरूको तार्किक मात्र होईन, यो अत्यन्त सुस्पष्ट पनि छ, जसले आफ्ना श्रोतालाई बुझ्ने क्षमताको प्रतिभा भएका मानिसहरूलाई हेर्न र मान्छेले हेर्न चाहेको सामग्री पोस्ट गर्न, उनीहरूले पाउनुपर्ने ध्यान प्राप्त गर्न पाउँदछन्।
द्रुत फिक्सको खोजीमा तिनीहरूका अनुयायीहरू बढाउन र उनीहरूको पुग्न विस्तार गर्न, त्यहाँ धेरै सुझावहरू र ह्याकहरू छन् जुन मद्दत गर्दछ, तथापि, दीर्घायु हुने फलोअरहरूको स्थिर वृद्धिको सबैभन्दा प्रभावकारी विधि भनेको सामग्रीको गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो।
त्यसोभए तपाईं कसरी आफ्नो सामग्रीको गुणस्तर बढाउन सक्नुहुन्छ?
हुन्छ, सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो ब्रान्ड परिभाषित गर्न आवश्यक छ, त्यसैले तपाईका पोष्टहरू निरन्तर विशिष्ट दर्शकहरूमा पुग्दछन् र तपाइँका प्रशंसकहरूले तपाइँबाट के अपेक्षा गर्ने जान्छन्। यहाँ मुख्य विचार तपाईको पोष्टहरु लाई सम्बन्धित बनाउनु हो।
तपाइँका फ्यानहरू बुझ्ने र उनीहरूसँग बोल्ने प्रासंगिक सामग्री पोस्ट गर्नाले स increase्लग्नता बढाउनेछ र तपाइँको पहुँच चौडा पार्नेछ। थप रूपमा, इन्स्टाग्रामको हास्यास्पद संतृप्त बजारमा, तपाईंले सामग्री तयार गर्नु आवश्यक छ जुन बाहिर खडा हुन्छ र तपाईंको लागि अद्वितीय छ।
तस्विरहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी सम्पादन गर्ने सिक्नुहोस्, उनीहरूलाई फ्रेम गर्नुहोस् र आश्चर्यजनक छवि सिर्जना गर्नुहोस्। दुर्भाग्यवस, तपाईको सूर्यास्तको तस्विर, यद्यपि सुन्दर छ, तपाईले अरू लाखौं अन्य सूर्यास्त पोष्टहरूको बीचमा सूचना पाउनु हुने छैन।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरू पोस्ट गरिरहेको सामग्रीको सिर्जनात्मकतामा ध्यान दिन आवश्यक छ।
ह्यासट्यागहरू एक नयाँ उपकरणमा पुग्नको लागि र नयाँ दर्शकहरू हुन्।
कुल दर्शकहरूले तपाईका पोष्टहरू अवलोकन गर्छन् तपाईका अनुयायीहरूमा सीमित छैन जो वास्तवमै भनिएको श्रोताको केवल थोरै प्रतिशत मात्र बनाउन सक्दछ, विशेष गरी जब प्रभावी ह्यासट्याग प्रयोग गर्ने।
सहि ह्यासट्यागको साथ, तपाईंको प्रभावहरू उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न सक्दछ। इन्स्टाग्राम 'छापहरू' तपाईंको सामग्री प्रयोगकर्ताहरूलाई देखाइएको पटकको स den्केत गर्दछ। ह्यासट्यागको प्रयोगको साथ, तपाईंको पहुँच नाटकीय रूपमा सुधारिएको छ किनकि तपाईंको सामग्री धेरै धेरै व्यक्तिहरूलाई देखाइएको छ।
सर्वप्रथम, तपाईंले केवल ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ जुन तपाईंको आला र तपाईंको ब्रान्डिndingसँग सान्दर्भिक छ। उत्तम ह्यासट्यागहरू फेला पार्नु जुन तपाईंको सामग्रीलाई बधाई दिन्छ र तपाईंको पहुँच बढावा एक सिक्ने वक्र हो जुन महारत हुनु पर्छ।
यदि तपाईं एसईओ प्रयोगको लागि कुञ्जी शब्दहरूको बारेमा केही जान्नुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईंसँग हेडट्याग कसरी प्रयोग गर्ने र कुन ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्ने भन्ने बारे एउटा हेड-स्टार्ट छ। यदि होईन भने, यहाँ आधारभूतहरू छन्।
कुञ्जी शब्दहरू जस्तै, सानो वा मध्यम आकारको फलोअरहरूको साथ प्रयोगकर्ताहरूले सबै भन्दा लोकप्रिय ह्यासट्यागहरू प्रयोगबाट टाढा रहनु पर्छ। यी प्रायः एकल शब्दहरू हुन्छन् र # सामान्य र # फूड जस्ता वाक्यांशहरू सहित अत्यन्त जेनेरिक।
अन्य प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो संख्यामा पनि समान ह्यासट्यागहरू सहित सामग्री पोष्ट गर्दै, तपाईंको पोष्ट केवल उनीहरूको बीचमा डोरिनेछ जुन उच्च श्रेणीको कुनै सम्भावना छैन।
इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरूले मध्यम आकारको ह्यासट्यागहरू प्रयोग गरेर धेरै फाइदा लिन सक्छन् जुन एक लोकप्रिय पर्याप्त मात्रामा प्रयोगको लागि पर्याप्त लोकप्रिय छ, आदर्श रूपमा करीव २०,००० पोष्टहरूमा ताकि तपाईंको पोष्टहरू तपाईंको विशिष्ट स्थानमा उभिए। एक पटक तपाईले केहि पाउनु भयो जुन तपाईको खाताका लागि उत्तम छ, तपाईले सुची तयार गर्न सक्नुहुन्छ सूची तयार गर्न को लागी भविष्यको पोष्टहरु सुलभ गर्न को लागी पुग्ने कुरो, अद्वितीय र प्रभावी ह्यासट्याग संग।
थप रूपमा, तपाईं ह्यासट्याग ट्रेंडहरूको खोजीमा हुनुपर्दछ जुन तपाईं आफ्नो पोष्टहरूमा सजीलै थप सान्दर्भिक बनाउनको लागि थप्न सक्नुहुनेछ।
त्यहाँ केहि महत्वपूर्ण दिशानिर्देशहरू छन् जब तपाईका पोष्टहरूमा ह्याशटैगहरू समावेश गर्दछन्। अनुयायीहरु मा चित्रहरु र भिडियोहरु को उपयोग गर्न को लागी अनुयायीहरु मा आकर्षित गर्न र खाताहरु लाई बढावा दिदै इन्स्टाग्राम धेरै हदसम्म सौन्दर्यात्मक छ। तपाईंको अनौंठो ब्रान्डको सौन्दर्यलाई सधैं विचार गर्नुपर्छ र तपाईं कसरी ह्यासट्याग प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो आउँदछ।
ह्यासट्यागहरू एक तरीकाले प्रयोग गर्नुहोस् जुन बाकीको खाताको उर्जालाई दर्साउँछ र दर्शकहरूलाई सही प्रभाव दिन्छ। सामान्यतया, अधिक ह्यासट्यागले तपाइँको पोष्टलाई संख्याको संख्यामा छोए पछि अझ ठूलो पहुँच हुन्छ।
यद्यपि त्यहाँ पक्कै पनि एक सीमा छ।
इन्स्टाग्रामले लगाएको वास्तविक सीमा has० ह्यासट्याग हो तर साधारणतया कम प्रयोगकर्ताहरू रुचाउँछन्।
जे होस्, तपाईले तपाई र तपाईका अनुयायीहरूका लागि काम गर्ने ह्यासट्यागहरूको संख्या फेला पार्न र प्रयोग गर्नुपर्दछ, तपाईका पोष्टहरूमा असम्बन्धित कुनै पनि कुरामा फाँसी दिइने छैन किनकि यसले दर्शकहरूबाट 'बाउन्स ब्याक' प्रतिक्रिया सिर्जना गर्दछ।
अन्तमा, तपाईको पोष्टलाई ह्याशट्याग क्लटरबाट खाली राख्नको लागि एक सहज तरीका भनेको पोष्टहरू मुनिको टिप्पणीमा ह्याशट्याग थप्नु हो। यस विधिसँग सक्कली पहुँच छ उनीहरूलाई सक्कली पोष्टमा छोड्दा तर पोष्टहरूलाई आफ्नै लागि अझ बढी बोल्न अनुमति दिन्छ।
इन्स्टाग्राम एल्गोरिथ्मले तपाईंको दर्शकहरूमा पुग्न धेरै गाह्रो बनाउँछ। यो त यो नै महत्वपूर्ण छ कि एल्गोरिथ्मको साथ काम गर्न र उत्तम समयमा पोस्ट गर्नुहोस् ताकि तपाईका अनुयायीहरूले यसलाई देख्ने र संलग्न हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
तपाईंको पोष्टमा तत्कालका प्रतिक्रियाहरू सब भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यसको मतलब यो छ कि अधिक लाइक र टिप्पणीहरू तपाईं चाँडै प्राप्त गर्नुहुन्छ, उच्च इन्स्टाग्रामले तपाईंको पोष्ट फिडमा धकेल्छ।
प्रत्येक ब्रान्डको स्थान र तिनीहरूको डेमोग्राफिक्स दुबैको कारण उनीहरूको लक्षित दर्शकको आधारमा पोस्ट गर्न फरक इष्टतम समय हुन्छ।
तपाईलाई पोष्ट गर्नको लागि उत्तम समय पत्ता लगाउनको लागि सबैभन्दा बढि पुग्छ तपाईलाई टेस्ट पोष्टको श्रृंखला गर्न आवश्यक हुन्छ। तपाईं आफ्नो विगतका सामग्री जाँच गर्नका साथै दिनभर बिभिन्न समयमा पोष्टहरू प्रकाशन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक पोष्टबाट तपाइँको स rates्लग्नता दरहरू हेर्नुहोस् जुन दर्शकहरू सबैभन्दा सक्रिय छन् र कुन पटक उच्चतम सment्लग्नता प्राप्त गर्दछन् भनेर पत्ता लगाउनुहोस्।
त्यहाँ असंख्य अध्ययनहरू छन् जुन इष्टतम सगाई प्राप्त गर्नका लागि इन्स्टाग्राममा पोष्ट गर्नको लागि उत्तम समयहरूको रूपरेखा हो। यी इन्स्टाग्राम भर मा सामान्य बनाउँछ र am बिहान 8 र बिहान Monday र सोमबार - शुक्रवार साँझ9मा पोस्ट गर्न सिफारिस गर्छ।
यद्यपि यी दिशानिर्देशहरू महत्त्वपूर्ण छन्, तपाईंको ईन्स्टाग्राम पहुँच बढाउन उत्तम तरिका भनेको तपाईंको फलोअर आधारमा फ्यान गर्नु र उनीहरूको चोटी गतिविधिको विशिष्ट समय पत्ता लगाउनु।
एक इन्स्टाग्राम व्यापार प्रोफाइल भएकोले तपाईंलाई इन्स्टाग्राम इनसाइट्समा पहुँच दिन्छ: एक उपकरण जसले तपाईंलाई तपाईंको अनुयायीहरू सबैभन्दा सक्रिय छन् जब जाँच गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं आफ्ना अनुयायीहरूको स्थान कुन शहरमा तिनीहरू पनी दिनको तिनीहरू कुन समयमा तिनीहरू सबैभन्दा सक्रिय छन् को स्तरमा देख्न सक्नुहुनेछ।
एकचोटि तपाईंले उत्तम समयहरू निर्धारित गर्नुभयो, तपाईं पछि योजना बनाउन सक्नुहुन्छ कि कुन पोष्टहरूलाई बाहिर पठाउँदा कहिले। त्यहाँ एक उपकरण छ जसले तपाईंलाई समय भन्दा अघि इन्स्टाग्राम पोष्टहरू अनुसूची गर्न अनुमति दिन्छ, त्यसैले तपाईं आफ्ना अनुयायीहरूमा पुग्नको लागि प्राइम टाइमलाई सम्झनुहुन्न।
मात्रा पोष्ट गर्दै
त्यहाँ कतिवटा विभाजित धारणा छन् कति इन्स्टाग्राममा प्रकाशित गर्न तपाईं पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही भन्छन् क्वालिटी मात्रा भन्दा राम्रो छ र तपाई हप्तामा पोष्टको संख्या सीमित गर्न तर उनीहरूलाई उच्च गुणमा राख्नु राम्रो हुन्छ। पाठ्यक्रमको गुणस्तर, प्राथमिकता लिन्छ, तर यदि तपाईंसँग उच्च-गुणवत्ता पोष्टहरूको आउटपुट बढाउने क्षमता छ भने, के तपाईंले? रिपोर्टहरूले देखाउँदछ कि इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरूले केवल %०% पोस्टहरू मात्र देख्दछन् जुन उनीहरूको फिडमा छन् जुन तपाईंको पोष्ट पूर्ण रूपमा हराउने संभावना बढाउँदछ। एक विपरीत दृष्टिकोण भन्छ कि एक पटक तपाईले आदर्श पोष्टिंग समय फेला पार्नुभयो भने, तपाईले अधिकतम समयमा सामग्री स्प्याम गर्नु पर्छ। यद्यपि, अनुभवले देखायो कि यसले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ र स engage्लग्नता स्तर छोड्ने कारण दिन्छ।
पोष्टको आदर्श मात्रा प्रति दिन धेरै सीमित छ, स्वाभाविक रूपमा, सगाईको लागि उपयुक्त समयमा। सहि संख्या तपाईंको दर्शकहरू र तपाईंको ब्रान्डमा निर्भर गर्दछ साथै कति गुणवत्ता सामग्री तपाईं प्रत्येक दिन पोष्ट गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। समग्रमा, विचार भनेको सामग्री ओभरकिलका साथ तपाईंको श्रोतालाई नराम्रो नगरी मिस हुने सम्भावनालाई कम गर्नु हो।
हुनसक्छ मात्रा भन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण स्थिरता हो। यदि तपाईं नियमित रूपमा उच्च स्तरको सामग्री पोस्ट गर्नुहुन्छ जसले स good्लग्नताको राम्रो स्तरहरू प्राप्त गर्दछ, इंस्टाग्राम एल्गोरिथ्मले तपाईंको पोष्टहरूलाई मनपर्दछ। यो पनि स्थिरता को विचार प्रबल गर्दछ। यदि तपाईं दिनमा times पटक पोष्ट गर्न सुरू गर्नुहुन्छ र हप्ताको एक-दुई पोस्टमा छोड्नुहुन्छ भने, तपाईं अनुयायीहरू गुमाउनुहुनेछ र स in्लग्नतामा कमी देख्नुहुनेछ। तपाइँको ब्रान्ड र सक्दो सम्भव भएमा लगातार पोष्टको लागि यो सही गर्नुहोस्।
इन्स्टाग्राम एल्गोरिथ्मले पनि कथाहरूमा काम गर्दछ। प्रत्येक अनुयायीका लागि, यो पहिले तिनीहरूको पछिल्लो गतिविधिमा आधारित सबैभन्दा सान्दर्भिक र आकर्षक कथाहरू प्रदर्शन गर्दछ। कथाहरूको फिडको शीर्षको नजिक एक ठाउँ लिनको लागि, तपाईंले यो निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईंको कथाहरूको सामग्री दर्शकहरूले अन्त सम्म यो हेर्न पर्याप्त व्यस्त छन्। यो मुद्दा हुनु हुँदैन किनभने कथाहरू जहाँ तपाईं आफ्ना श्रोताको साथ सबै भन्दा रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ। कथाहरू स्थायी छैनन्, त्यसैले तिनीहरूले तपाइँ तपाइँको ब्रान्ड वा खाता को एक अधिक अनौपचारिक र सापेक्ष पक्ष प्रदर्शन गर्न को लागी एक मौका दिन्छ। तपाईले पोस्ट गर्नु भएका छवि र भिडियोहरू पूर्णतामा फिल्टर हुनु हुँदैन र पर्दा पछाडि दिनहुँ गएकोमा अझ यथार्थवादी अद्यावधिक दिन सक्छ।
"तपाईको जैविक पहुँच सुधार गर्न सब भन्दा उत्तम स्थिति भनेको तपाईको कथामा नियमित सामग्री पोष्ट गर्नु हो जुन तपाई दर्शकहरु मार्फत सबै माध्यमबाट देखिन्छ, सन्देशहरू र प्रतिक्रियाहरू सहित तपाइँको कथाहरूसँग बारम्बार अन्तर्क्रिया, र यसलाई माथि राख्नु, नियमित प्रयोगकर्ताहरू द्वारा साझा गर्नु। , "फ्रेड हिच भन्छन्, मा एक सामाजिक मिडिया लेखक सिम्पलग्राड र Uktopwriters.
कथाहरू पनि तपाईंको पोष्टको ब्याक अप गर्नका लागि एक उत्तम तरीका हो। तपाइँ तपाइँको दर्शकलाई तपाइँको फिड जाँच गर्न को लागी याद गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाइँको मुख्य फिडमा सामग्रीलाई सुदृढ पार्दै। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं एक ब्राण्ड हुनुहुन्छ र यस समयमा छुट छ भने, तपाईं यसको बारेमा फिडमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको कहानी केही चित्रहरू र भिडियोहरू थप्न छुटको वरदानलाई बढावा दिन र यसलाई छुटेको हुनसक्दछ।
तपाइँको श्रोतालाई संलग्न गर्नुहोस्
सगाई बढाउनको लागि उत्तम तरिका भनेको यसको लागि सिधा सोध्नु हो। त्यहाँ कुनै लाज छैन शेयर र मनपर्ने को लागी सोध्नु छ। यदि तपाईंले तपाईंको श्रोताहरूको कुरा सुन्नुभयो र उनीहरूले मनपराउने सामग्री प्रदान गर्नुभएको छ भने, तिनीहरू खुशीसाथ तपाईंको पोष्टहरू साझा गर्छन् र तपाईंको जैविक पहुँच बढाउँछन्। थप रूपमा, तपाईंसँग तपाईंको पोष्टहरू, भिडियोहरू र कथाहरू मार्फत तपाईंको दर्शकहरू समक्ष पुग्ने विकल्प छ। इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई प्रश्नहरू सोध्ने, तपाईंको दर्शकका प्रश्नहरूको जवाफ दिन, पोल चलाउने र टिप्पणीहरूको जवाफ दिने सम्भावना प्रदान गर्दछ। तपाईं अनलाइन समुदायलाई बढावा दिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईं सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ यसको एक हिस्सा भएर र तपाईंको दर्शकहरूको ख्याल राखेर।
"तपाइँको दर्शकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र अर्को कडा, दुई-पक्ष सम्बन्ध निर्माण गर्ने अर्को उत्तम तरिका प्रयोगकर्ताले उत्पन्न सामग्री पोष्ट गर्नु हो। यो छविहरू, तस्विर वा भिडियोको रूपमा प्रयोगकर्ता द्वारा विशेष रूपमा बनाइएको सामग्री हो। ठेठ विज्ञापन वा ब्रान्डि than भन्दा यो ठिक्क मात्रामा विश्वासिलो मात्र होइन, यसले ब्रान्डलाई मानवीय बनाउँछ र यसलाई उल्लेखनीय रूपमा सम्झनीय बनाउँछ, ”हिलारी विल्सन भन्छन, टेक ब्लगर असाइनमेन्ट मद्दत र असाइनमेन्ट सेवाहरू.
तपाईको जैविक पहुँचलाई बढावा दिनुको मतलब तपाईको ब्रान्डमा के मिल्दछ र तपाइँको लक्षित श्रोतालाई के बोल्दछ बीचमा उत्तम सन्तुलन खोज्नु हो। तपाइँको श्रोतालाई बुझ्ने अधिकतम पहुँचको कुञ्जी हो र तपाइँको इन्स्टाग्राम रणनीतिले तपाइँ कसरी तपाइँ वा तपाइँको ब्रान्डलाई उनीहरूलाई सान्दर्भिक बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर वरिपरि घुम्नुपर्दछ। दुर्भाग्यवस, जैविक पहुँचमा ठूलो वृद्धि तपाइँको औंलाहरूका तस्वीरमा गर्न सकिदैन। यो समय, लगनशीलता र धैर्यको साथ साथै तपाईंको श्रोताको लागि अनुकूलताको क्षमता लिन्छ।
← PANTONE® कलर ब्रिज ™ CMYK पीसी - प्रक्रिया रङ सन्दर्भ चार्ट नि: शुल्क डाउनलोड
ग्राफिक डिजाइन, UI, र UX एक संक्षिप्त →